I-ESAPISM - INKQUBO YOKUQALA Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
NgoDisemba 4, 2021 18:00 PM - 21: 00
« U-ESCAPISM - uMboniso
Liquid Rituals-izithuba zethiyetha ezizinzileyo zomdaniso »
Kwinkqubo yokuphehlelelwa ungalindela intetho yegcisa kunye nenkqubo yeaudio, ebonakalayo, kunye nentshukumo ethi "Living Archive" nguShannon Sea Novaa (@ ulwandle.novaa) kunye neJumọke. Intetho yamagcisa imodareyithwa nguLesley Whitaker
* Isishwankathelo senkqubo * phambi nasemva kwentetho yamagcisa
Amabali ethu angcwele kwaye kufuneka abhalwe kwaye agcinwe ukuze songeze
kwilaphu lenkcubeko yanamhlanje. Inkqubo yethu, "iNdawo ephilayo" ifuna ukwenza
kanye oko ngokumema uluntu ukuba benze indawo yabo eyodwa
amabali kunye nezimvo ukwenzela ukuba babe nako ukugcinwa, balungise kwaye basasaze abo
ulwazi. I-Shannon Sea Novaa kunye neJumọke iya kubonisa isandi, imbonakalo, kunye
imisebenzi yentshukumo ebandakanya izandi kunye neentshukumo ezivela kwi
abaphulaphuli ukubhiyozela ubukho bethu kwimbali.
*Iseti yokuvula *
I-Shannon Sea Novaa iya kubonisa isandi kunye nokusebenza okubonakalayo. Umsindo
ukusebenza kuya kunceda ukuhlanganisa uluntu kwaye kuya kusebenzisa izandi,
amabali, kunye neengcinga, ezivela kumalungu abaphulaphuli abathatha inxaxheba, kwaye zibandakanywe
oko kumdlalo wakhe osetiweyo. Baza kubonisa nobugcisa obuvelisayo
ukuba ikhowudi ebandakanya umxholo (s) of Escapism, ukudlala ngexesha
* Iseti yokuvala *
I-Shannon Sea Novaa kunye noJumọke baya kudlala kunye. Ekuqaleni kwe
iseti, i-Sea Novaa kunye ne-Jumọke iya kunika ukusebenza kwesandi esiphakamisayo
abaphulaphuli kwaye ubathathe uhambo. UJumọke uzakongeza ezinye ezithethiweyo
igama kwaye ubukhulu becala intshukumo ngelixa Sea Novaa iqhubeka ukwenza isandi.
Ukunyakaza kukaJumọke kuya kubandakanyeka abaphulaphuli kwaye kubandakanye abanye babo
iintshukumo kwi Jumọke's performance.
Bhukisha itikiti lakho APHA Ngoku.
→ Vernissage: Disemba 03.12.2021, XNUMX; fumana ulwazi oluninzi Apha.
→ Umboniso: Disemba 04th - 24.12.2021th, XNUMX; fumana ulwazi oluninzi Apha.
→ umboniso usimahla.
→ ulwazi oluthe vetshe malunga neprojekthi kunye namagcisa anokufunyanwa Apha.
Inkqubo yokukhaba ibandakanya iintetho kunye namagcisa kunye nokusebenza komculo.
Kuya kubakho iaudio enkulu, umfanekiso kunye nenkqubo yentshukumo "Living Archive" nguShannon Sea Novaa (@ ulwandle.novaa) kunye noJumọke, kwaye urhatya lonke luya kusasazwa bubukhoma. Ngorhatya luzakumodareyithwa nguLesley Whitaker.
* Inkqubo * phambi nasemva kwentetho yegcisa
Amabali ethu angcwele kwaye kufuneka abhalwe kwaye agcinwe ukuze sibe negalelo kwinkcubeko yanamhlanje.
Inkqubo yethu yoLondolozo lweeNkcukacha eziBalulekileyo ijolise ekwenzeni kanye oko ngokumema uluntu ukuba luyilele indawo yamabali kunye nezimvo zabo ezizodwa ukuze bakwazi ukugcina, balawule kwaye babelane ngolwazi lwabo.
I-Shannon Sea Novaa kunye ne-Jumọke i-audio ekhoyo, ebonakalayo kunye
kunye nemidlalo yentshukumo ebandakanya izandi kunye neentshukumo zabaphulaphuli ukubhiyozela ubukho bethu ebalini.
I-Shannon Sea Novaa iya kubonisa i-acoustic kunye nokusebenza okubonakalayo.
Ukusebenza komsindo kuya kunceda ukuhlanganisa uluntu kwaye kuya kubandakanya izandi, amabali kunye neengcinga zabaphulaphuli abathatha inxaxheba ekusebenzeni kwabo ngokuphila.
Baza kubonisa kwakhona ubugcisa obuveliswayo ababubhalileyo kwaye obuthatha umxholo othi "escapism".
yeseti, Sea Novaa kunye Jumọke uya kunika ukusebenza isandi ukuba
kwaye ithatha abaphulaphuli uhambo. UJumọke ke ube lilizwi elithethiweyo
amagama athethiweyo kwaye ngokukodwa intshukumo ngelixa uLwandle lweNovaa luqhubeka nokwenza izandi.
Ukunyakaza kukaJumọke kuya kubandakanya abaphulaphuli kunye nabanye bakhe
Vumela iintshukumo ukuba zingene kwintsebenzo kaJumọke.
Bhukisha itikiti lakho ngoku APHA.
→ Vernissage: Disemba 03.12.2021, XNUMX; ungafumana ulwazi oluninzi apha.
→ Umboniso: Disemba 04th - 24.12.2021th, XNUMX; ungafumana ulwazi oluninzi apha.
→ Unokufumana ulwazi oluninzi malunga neprojekthi kunye namagcisa apha.
Uyilo lwemizobo nguRita Eperjesi (IG:@ritaeperjesi Iwebhusayithi).
◥ Nceda uqaphele: Imfuneko yokuqala yokwamkelwa kwimisitho / kwimiboniso eOyoun sisitofu sangoku sokugonywa / isatifikethi sokubuyisela. E-Oyoun kukho imfuneko yemaski de kube kuphinde kunikwe isaziso. Unokufumana ulwazi oluninzi malunga nengcamango yococeko apha.
◥ E-Oyoun akukho ndawo yocalucalulo ngokwesini, ubutshaba, ubutshaba obudlulayo, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olunjengokuchasa abamnyama, ukuchasa amaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasene nobuJuda kunye naluphi na uhlobo lobundlobongela okanye ubundlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo yomntu wonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasa kwaye simelane. Ukuba kukho umntu okanye into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukukunceda! Ukuba ungathanda ukusixelela malunga namava emva kwesiganeko, nceda usibhalele i-imeyile> awareness@oyoun.de okanye usithumelele umyalezo ongachazwanga ngegama lethu Iwebhusayithi.
Nge-4 kaDisemba ngo-2021